အနည်းဆုံး အခကြေးငွေကိစ္စ မပြောဘူးလို့နေတာ။
ဒါပေမဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေလို့ တစ်ခုခုတော့ ရေးချင်လာတယ်။
အရင်ဆုံးမေးရမယ့် မေးခွန်းက ဘာကြောင့် အနည်းဆုံး အခကြေးငွေတိုးတောင်းကြတာလဲ?
အဓိကကတော့ နေထိုင်မှုစရိတ် Living Cost ကြောင့်
တကယ်လို့သာ လက်ရှိ တစ်ရက်လုပ်အားခ ၃၆၀၀ ကနေ အခုလို ၄၈၀၀ လောက်ရမှ အလုပ်သမားတွေ ဘက်က လူနေမှုစရိတ်ကာမိနိုင်မယ့် အနေအထား။
တစ်ဖက်မှာလည်း လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက် ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် Labour Cost က တက်လာမယ်။ လုပ်အား Productivity က တက်မလာဘူးဆို မပေးချင်ဘူး။
မဖြစ်မနေ ၄၈၀၀ ပေးရမယ်လို့ အစိုးရက အမိန့်ကြော် ငြာစာထုတ်လိုက်ရင် လုပ်ငန်းတွေဘက်က မဖြစ်မနေပေးရမှာပဲ။
အလုပ်ရှင်ဘက်က Labour Cost တက်လာတဲ့ အတွက် စရိတ်ကာမိအောင် အလုပ်သမားလျှော့လာမယ့် အနေအထားရှိမယ်။ တကယ်လို့မလျှော့ဘူးဆိုရင်တောင် အရင်တုန်းက ၂ ယောက်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကို ၁ ယောက်ပဲလုပ်ခိုင်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါဆို Stress တေပိုပိလာမယ်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း Unemployment Rate ပါတက်လာနိုင်တယ်။
ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တောင် လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က လုပ်လာနိုင်တာက စရိတ်ကာမိအောင် သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ ဈေးတက်ဖို့စဉ်းစားမိမှာပဲ။
အလုပ်သမားတွေအပါအဝင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဈေးနှုန်းတက်တဲ့ ဒဏ်ကိုခံရအုံးမယ်။ ဒါဆို တိုးသွားတဲ့ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေကလည်း ဘာမှမထူးတော့ဘဲ
ငွေကြေးဖောင်းပွတဲ့ Inflation ဘက်ပြန်လှည့်လာပြီ။
ဒါဆိုမြန်မာငွေဒဏ်ဖိုးကပိုကျလာမယ်။ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအထိ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
တချို့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ် တက်လာတာမခံနိုင်လို့၊ အခြားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ အဆင်မပြေလို့ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဒီကိစ္စက နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ Political Economy ဖြစ်လာပါပြီ။
ဖြေရှင်းပေးမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဉာဏ်မီသလောက် စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်
(၁) အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေလျော့ ကျလာအောင် အစိုးရဘက်ကဝင်ထိန်းသင့်ပါတယ်။
လိုအပ်လာရင် အစိုးရက ဝင်ထိန်းသင့်တဲ့အကြောင်း
ဘောဂဗေဒပညာရှင် John Maynard Keynes ကပြောခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။
(၂) ပိုဖြစ်သင့်တာက အလုပ်သမားတွေဘက်က လုပ်အားခနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရည်အသွေးနဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား Productivity ပေးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထား သင့်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်း (၂) ခုသာ တကယ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတွေ ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ပါ အထောက်အပံ့ရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ဘာလို့ ပုံမှန်ရှိရမယ့် အသံထက် မသိမသာ မြင့်နေခြင်း (Sharp) နဲ့ နိမ့်နေခြင်း (Flat) တွေဖြစ်ရတာလဲ ?
ဒါကို လေ့လာဖို့အတွက် ဂီတဆိုတာ ဘာသာစကားဆိုတာရယ် .. ဂီတကိုလေ့လာရင် အခြားဘာသာစကားတွေလိုပဲ Skill4ခု ရှိတယ်ဆိုတာ သိရပါမယ် ။
ဟုတ်ပြီ ဘာလို့ Out of Tune (ကီးချော်) နေရသလဲဆိုတဲ့အဖြေကို ပေးရမယ်ဆိုရင် ဒီစကေး ၄ခု ထဲက Note အဖတ် (Sight - Singing) နဲ့ အကြားစွမ်းရည် (Ear Training) အပိုင်း အားနည်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.. အဆင့်မြင့်လာရင်တော့ အရေးအဖွဲ့ (Music Theory ) အပိုင်းပါလိုလာလိမ့်မယ်.. ဝါသနာပါလို့ သီချင်းတော့
ညည်းဖူးကြပေမယ့် အပေါ်က စကေး ၃ခုကိုတော့ သင်ယူဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ယောင်လို့တောင် စဉ်းစားမိမှာ မဟုတ်ဘူး.. ဒီစကေးတွေက တခုနဲ့တခု ဆက်စပ်နေတာ..
ဥပမာ သင်မသိတဲ့ မကြားဖူးတဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုကို သင်ယူကာစမှာ အသံနေအသံထား မှားပြီး အိုးနင်းခွက်နင်း ပြောနေတာဟာ ဂီတမှာ ဆိုရင် ကီးချော်နေတာပဲပေါ့..
သင်ကြားဖူးတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ပြန်ဆိုခြင်းဟာ ဂီတဘာသာစကားကို သင်ယူတတ်မြောက် ထားခြင်း မမည်ပါဘူး.. သဘောက ကိုရီးယား ဇာတ်ကား ကြည့်တာများလို့ ကိုရီးယားဘာသာ စကား တချို့လိုက်ပြောနိုင်ပေမယ့် တိတိပပ ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိသလိုပေါ့..
အဲဒီတော့ ဒီစကေး ၄ခုစလုံးပါဝင်တဲ့ ဂီတဘာသာစကားကို တတ်မြောက်ပြီဆိုရင် ကီးချော်ခြင်းသာမက အခြားပြဿနာတွေ ဖြစ်တဲ့ စည်းချက်တွေချော်နေတာ.. သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို မှန်ကန်စွာ အဝင်အထွက် မလုပ်တတ်တာ စတာတွေပါပြေလည်သွား မှာပါ.. ဒါတွေက သင်ယူလို့ရတဲ့အရာတွေပါ..
Technical ပိုင်းကကြည့်ရအောင် ဘာလို့ Out of Tune ဖြစ်သလဲဆိုတာ..
မိမိမရင်းနှီးတဲ့ အသံတခုကိုကြားရင် ဦးနှောက်က ဘာသာပြန်ဖို့ အချိန်တခုလိုတယ်.. ဘာအသံလဲပေါ့.. ဒီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက ပြုမူလှုပ်ရှားကြတာ.. ဥပမာ
ကြားတဲ့ အသံ (Pitch) တစ်ခုကိုပြန်ဆိုမယ်ဆိုပါတော့..
ဦးနှောက်က အသံတုန်ခါမှုတစ်ခုကို ကြားခြင်းအားဖြင့် လက်ခံရရှိတယ်
ဘာသာပြန်တယ်.. အဲဒီ Data ကို အသံထုတ်လွှတ်ပေးမယ့် Vocal Cords ဆီကိုပို့ပြီးတုန်ခါစေခြင်းဖြင့် ကြားတဲ့ အသံ (Pitch) အတိုင်းပြန်ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့..
ဒီနေရာမှာ သင်က စိုးရိမ်စိတ် မှားမှာ ကြောက်တဲ့ စိတ်လွန်ကဲနေရင် ဦးနှောက်က ဘာသာပြန်တဲ့ အလုပ်ကို ကောင်းစွာ မလုပ်နိုင်ပဲ Data အမှားကို အသံထွက်တဲ့အင်္ဂါရပ်တွေ ဆီပို့မိတဲ့အခါ အသံ (Pitch)
ကလဲ မှားတော့တာပေါ့.. ဒါကြောင့် အစပိုင်းမှာ အသံတွေကို မှန်ကန်စွာသီဆိုနိုင်ဖို့ ဦးနှောက်ကို ဘာသာပြန်နိုင်ဖို့ အချိန်တခုပေးဖို့လိုတယ်.. နောက်ပိုင်း ဒီအသံတွေကို မှတ်မိလာတဲ့အခါ မှန်မှန်နဲ့ မြန်မြန် သီဆိုနိုင်လာလိမ့်မယ်.. ဒါဆို Out of Tune (ကီးချော်) ဖြစ်တာ တွေလဲ မရှိသလောက်နဲသွားမှာပါ..
ကျွန်တော့် သင်ကြားမှု အတွေအကြုံအရ ဝါသနာရှင်တော်တော်များများဟာ အသံတစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက် လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး အင်အားသုံးသီဆိုကြတယ်.. အကျိုးဆက် အနေနဲ့ ဒီအသံမျိုးတွေဟာ မသိမသာ
မြင့်နေ (Sharp) ဖြစ်နေတတ်တယ်..
Over Use အင်အားသုံးတာများလို အသံထိသွားရင်လဲ အမြင့်သံတွေမရောက်တော့ပဲ အမြဲ (Flat) ဖြစ်နေတတ်တယ်.. ဒါကတော့ အန္တရာယ် ရှိတယ်.. ကိုယ်က အခုပြောခဲ့သလိုမျိုး ဆိုမိနေရင် သတိထား.. နောက်တစ်ခုက သီဆိုရမယ့်သီချင်းရဲ့ အသံအနိမ့်အမြင့် (Pitch Range) ဟာ မိမိရဲ့ Vocal Range အထက်ကို ကျော်လွန်နေ
ရင်လည်း Out of Tune ဖြစ်တတ်ပါတယ်..။
ခြေတွေလဲ အများကြီးရှိပါသေးတယ်.. ကြုံတွေ့ရတဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ
ပြဿနာတွေကလဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူတဲ့အတွက်
ဖြေရှင်းရတဲ့ နည်းလမ်းတွေကလဲ မတူနိုင်ပါဘူး.. အသံကိုကြားမှသာထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပါ..။
ဒီဆောင်းပါလေးလဲ ဝါသနာရှင်တွေအတွက် အထောက်အကူတစ်ခ
Posted by Alex Aung at 1:22 AM No comments:
Labels: Learning articles, ဂီတဆိုင်ရာဆောင်းပါး
ဘွဲ့နှင်းသဘင် ကျင်းပခြင်း၊ အခမ်းအနားတွင် ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ခြင်းကို ၁၂ ရာစုနှင့် ၁၃ ရာစု ခေတ်ကတည်းက စတင်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပွဲတက်ဝတ်စုံ အခမ်းအနားဖြင့် စီစဉ်ကျင်းပခြင်းအား တက္ကသိုလ်များက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပညာတတ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံကြရသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများသည် တစ်သားတည်း ဖြစ်သည်ဆိုသော သဘောကို ဖော်ကျူးရန်အလို့ငှာ တူညီဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
၁၃၂၁ ခုနှစ်က ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်သည် ဒေါက်တာဘွဲ့၊ သာမန်ဘွဲ့နှင့် လက်မှတ်များကို ဘွဲ့ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ပြီး တက်ရောက်ယူမှသာ ထုတ်ပေးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
၁၄ ရာစုလယ် နှောင်းပိုင်းတွင် အချို့သော ကောလိပ်အဆင့် ကျောင်းများတွင် ဘွဲ့ယူအခမ်းအနား၌ ဝတ်ဆင်သော ဝတ်စုံကို ဝတ်ရုံရှည် ဝတ်ဆင်မှုအား ကန့်သတ် တားမြစ်ခဲ့ကြောင်းလည်း တွေ့ရသည်။ အင်္ဂလန်မင်းဆက် အဋ္ဌမမြောက် ဟင်နရီ လက်ထက်တွင် အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နှင့် ကင်းဘရစ်ခ်ျ တက္ကသိုလ်များတွင် ဘွဲ့ဝတ်စုံကို စံတစ်ခုအနေနှင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းစံသတ်မှတ်ချက်အရ သေးကွေးလွန်းသည့် ဘွဲ့ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို လက်မခံခဲ့ပေ။
ရှေးခေတ်က ဘွဲ့ဝတ်စုံကဲ့သို့သော ဝတ်ရုံများကို ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီးများသည် ကျောင်းတော်များတွင် ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပညာရှင်များအနေနှင့် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် ပညာသင်ယူသူရော သင်ကြားသူပါ ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ယခင်က နေ့စဉ် ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးသည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများတွင်သာ ဝတ်ဆင်ကြတော့သည်။ နောက်ပိုင်းကျမှ ပညာသင်နှစ် အားလုံးပြီးဆုံးချိန် ဘွဲ့လက်မှတ်ယူချိန်၌ ဝတ်ဆင်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ဘွဲ့ဝတ်စုံများကို အလယ်ခေတ် တက္ကသိုလ်များတွင် ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်း ထိပ်တန်း တာဝန်ယူထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိတို့ အဆင့်အတန်းအလိုက် ဘွဲ့ဝတ်ရုံကြီးများကို ဝတ်ဆင်ကာ အခမ်းအနားများ၊ သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ကြရသည်။ တရားသူကြီးများသည် ခြေကျင်းဝတ်အထိ ရှည်သော ဝတ်ရုံကြီးများကို ဝတ်ဆင်ကာ တက်ရောက်လေ့ ရှိသည်။
ယခင် အလယ်ခေတ် အခမ်းအနား၊ အစည်းအဝေးများ၊ တရားစီရင်ရေးများ ကျင်းပသည့် ခန်းမနေရာသည် များသောအားဖြင့် အေးစက်ပြီး လေတိုက်သည့် နေရာများ ဖြစ်သောကြောင့် ဝတ်ရုံကြီးများ ဝတ်ဆင်ခဲ့ရာမှ အစဉ်အလာအဖြစ် ဝတ်ရုံများကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြဟန် တူပါသည်။
ဘွဲ့ဦးထုပ်ကို ၁၅ ရာစုနှစ် လောက်ကတည်းက ပညာတတ် အထိမ်းအမှတ်အနေနှင့် ဆောင်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ဘွဲ့ဦးထုပ်ကို ပါမောက္ခများသာ ဆောင်းရန် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းလည်း တွေ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မှ ပန်းဖွားများ၊ အရောင်များပြောင်းကာ ခမ်းနားစေရန် စီစဉ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“စာမေးပွဲ အောင်မြင်သည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် လက်မှတ်ရ ပညာတတ်တစ်ဦး ဖြစ်သွားသည်။ သူသည် ဒေါက်တာ၊ သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့ကို သူသင်ကြားခဲ့သည့် ဘာသာရပ်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသော်လည်း မာစတာဆိုသည့် အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိမရှိကို ပြည်သူ့ထံဆင်းကာ အစစ်ဆေးခံရမည် ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ သူ့ကို ခမ်းနားထည်ဝါသည့် ဘုရားကျောင်းကြီး တစ်ကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံရမည်။ ထိုကျောင်းတွင် သူသည် မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားရမည်။ သူပြောကြားမည့် အကြောင်းအရာများသည် သူတတ်ကျွမ်း လေ့လာထားသည့် ပညာရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများသာ ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်တွင် နားထောင်နေသည့် ပရိသတ်ထဲက ကျောင်းသားများသည် သူ့ကို သိလိုသမျှ ထမေးမည်။ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်။ သူက ထိုသူတို့၏ အမေးများကို ချက်ကျလက်ကျ ပြန်လည်ဖြေဆို ရှင်းလင်းပြရန် လိုသည်။ ထိုသို့ အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုရှင်းလင်းနိုင်ပြီ ဆိုလျှင် တက္ကသိုလ်က သူ့ကို မာစတာဘွဲ့ နှင်းအပ်မည် ဖြစ်သည်။
ဘွဲ့အပ်နှင်းရာတွင် သူ့ကို ပါမောက္ခ ထိုင်သည့် ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်စေပြီး ရွှေလက်စွပ်တစ်ကွင်း၊ စာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် ခေါင်းဆောင်းရန် ဒေါက်ချာ ဦးထုပ်ကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်လေ့ ရှိသည်” ဆိုသည်မှာ ရှေးခေတ် မာစတာဘွဲ့ယူသည့် သူတစ်ဦး၏ အခမ်းအနား ဖြစ်သည်။
ဘွဲ့အခမ်းအနား ကျင်းပစဉ်နှင့် ဘွဲ့လက်မှတ် ပေးအပ်စဉ်တွင် ဘွဲ့ဦးထုပ်ကို တောက်လျှောက် ဝတ်ဆင်ထားရမည်။ ဘွဲ့ယူသူများသည် ဆုတောင်းသည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်သီချင်း တီးမှုတ်နေစဉ် အခါတွင်သာ ဦးထုပ်ကို ချွတ်ခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်သီချင်း၊ သို့မဟုတ် ဆုတောင်းမှု ပြီးဆုံးလျှင် ဦးထုပ်ကို ပြန်ဆောင်းရမည်။
ပန်းဖွားကို မည်သည့်ဘက်သို့ ချမည်ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိ။ ကိုယ့်ကျောင်းနှင့် ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဘယ်ထားသည် ဖြစ်စေ၊ ညာထားသည် ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဘွဲ့အပ်နှင်းခြင်း ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားဖြင့်သာ ရရှိသော ဘွဲ့များကို အပ်နှင်းချီးမြှင့်လေ့ ရှိသည်။ ဘွဲ့ယူမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ပညာရပ်များကို သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်း အစစ်ဆေးခံယူပြီး ဖြစ်ရမည်။
ဘွဲ့မယူမီ ဘွဲ့ယူမည့် သူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အတန်း သို့မဟုတ် စာသင်နှစ်ကို အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရသည်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်အရည် အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူများကို ဘွဲ့များ အပ်နှင်းချီးမြှင့်သောပွဲကို ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားနေ့ (Graduation Day) အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ အပ်နှင်းချီးမြှင့်လေ့ ရှိသည်။
ဘွဲ့အပ်နှင်းချီးမြှင့်ခြင်းကို တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် အဓိပတိ၊ သို့မဟုတ် ကျောင်းအကြီးအကဲများက ဘွဲ့လက်မှတ်များကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်လေ့ ရှိသည်။ ဘွဲ့လက်မှတ် မှတ်ပေးရာတွင် အဓိပတိသည် တစ်ဦးချင်းအား ပေးသကဲ့သို့ အုပ်စုလိုက်၊ အဖွဲ့လိုက် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းများလည်း ရှိတတ်သည်။
အုပ်စုလိုက် ချီးမြှင့်သည့် ဘွဲ့လက်မှတ်များကို မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများရောက်မှ ကျောင်းအုပ်ကြီးများက သီးခြားပြန်ပေး အပ်ခြင်းများလည်း ရှိတတ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် မိမိတို့ကျောင်းအလိုက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားများ ကျင်းပပြီးချိန်တွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အထိမ်းအမှတ် ပါတီပွဲများလည်း ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
Posted by Alex Aung at 4:35 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 5:32 AM No comments:
ဒီဆောင်းပါးလေးကိုလည်း တစ်ခြား မသိသေးသူတွေ ရှိနိုင်တာမလို့ ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခြေခံအချက်တွေဖြစ်လို့ သိသူတွေရှိပေမယ့် မသိတဲ့ လူပမာဏဟာ မယုံနိုင်စရာ များပြားပါတယ်။ Admin ကိုယ်တိုင်လဲ အရင်က ဒီအချက်တွေကို မသိခဲ့တာမလို့ ကိုယ့်လိုပဲ မှားနေကျသူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာပြီး ရေးလိုက်ရပါကြောင်း။
Credit: Golden _ Dreams ´ Page
Posted by Alex Aung at 5:23 AM No comments:
ကော်ဖီပေါင်မုန့် ပူတင်း ~ ချိစ်ပြောင်းဖူးလက်ဖက်သုပ် ~ ခေါပုပ် ~ သာခွေယိုင် (ထားဝယ်)
ဒီတစ်ခါတော့ အဆာပြေပဲစားစား နံနက်စာအဖြစ်စားစား စားလို့ရမယ့် မုန့်လုပ်နည်းတွေကို ကူးယူ Share ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတခါတော့ ကော်ဖီကြိုက်သူများအတွက် စားလို့လဲကောင်း အဟာရလဲရှိတဲ့ ကော်ဖီပေါင်မုန့်ပူတင်းလေးပါ။ ကော်ဖီမှုန့်ကိုတော့ မြန်မာပြည်မှာအလွယ်တကူလဲဝယ်လို့ရပြီး လူကြိုက်များတဲ့ Premier coffee မှုန့်ကိုသုံးထားပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
၂။ ကြက်ဥ - ၄ လုံး
၄။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၈ ပုံတပုံ
၅။ သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၁၂ ဇွန်း
၆။ စပျစ်သီးခြောက် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း (မထည့်လဲရ)
၇။ premier espresso coffee mix (သို့) premier3in 1 coffee mix - ၂ ထုပ် (၁ ခွက်စာအထုပ်)
၈။ ထောပတ် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ပေါင်မုန့် ပူတင်းလုပ်ရန်အတွက် ၈ လက်မ (သို့) ၉ လက်မ ပတ်လည် လေးထောင့် ဗန်း နှင့် ပြုလုပ်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့် ပူတင်းလုပ်မည့် ဗန်းကို ထောပတ် ၁ ဇွန်း ဖြင့် အနှံ့ သုတ်ထားပါ။
၃။ ပိုင်းထားတဲ့ပေါင်မုန့် လေးတွေဗန်းထဲထည့်ပါ။ စပျစ်သီးခြောက်တွေနေရာအနှံ့ ဖြူးထားပါ။
၄။ ဇလုံတခုထဲတွင် ကြက်ဥ၊နွားနို့ ၊ဆား၊ သကြား၊ ကော်ဖီမှုန့်တို့ ကိုထည့်ပြီး သကြားများအရည်ပျော်သည်အထိ ခလောက်ပါ။ ပြီးလျှင် ပေါင်မုန့် များအပေါ်မှဆမ်းပါ။ (အိစံက တြိဂံပုံလေးတွေထောင်လျက် စီထည့်ထားလို့ တြိဂံပုံပေါင်မုန့် ထိပ်လေးတွေရဲ့ အပေါ်ကိုလိုက်လောင်းပါတယ်။)
၅။ ပေါင်မုန့် ပူတင်းမဖုတ်ခင် oven ကို ၃၅၀'F (175'C) မှာ ၁၀ မိနစ်ခန့် ဘာမှမထည့်ပဲအရင်အပူပေးထားပါ။ အပူပေးထားသော oven ထဲမှာ မုန့် ဗန်းကိုထည့်ပြီး ၁ နာရီဖုတ်ပါ။
၆။ ပူပူနွေးနွေး ပေါင်မုန့် ပူတင်းကို နို့ဆီလေးဆမ်းစားရင် ပိုအရသာရှိပါတယ်။
အခုနည်းလေးကတော့ အိစံတို့ရဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဖက်ကို အနောက်တိုင်းစတိုင်လ်လေးနဲ့ ပေါင်းပြီး fusion သဘောမျိုးလေးသုပ်ထားပါတယ်။ လက်ဖက်ကို အခြားနိုင်ငံကသူများကလဲ ကြိုက်ကြတော့ ဒီနည်းလေးနဲ့ သူတို့ကိုဧည့်ခံရင်တော့ အတော်ကို အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးနဲ့သုပ်မယ်ဆိုရင် ဆီမပါတဲ့လက်ဖက်ကို အသုံးပြုမှ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အိစံကတော့ အိစံစားနေကျဖြစ်တဲ့ ဆီမပါတဲ့ ဦးကာက ဇယန်းလက်ဖက်နှပ်ကို သုံးပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ ဦးကာက ဇယန်းလက်ဖက်နှပ် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၂။ ပြုတ်ပြီး ခြွေထားသော ပြောင်းဖူး - ထမင်းစားဇွန်း ၈ ဇွန်း
၃။ ခရမ်းချဉ်သီး - ၁ ခြမ်း
၄။ ပါးပါးလှီးထားသော ဆလပ်ရွက် - လက်တဆုပ်စာ
၅။ ခြစ်ထားသော ချိစ်အမျှင် - ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်း
(ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း = လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း = 15 ml)
ပါဝင်သောပစ္စည်းများကိုဇလုံတခုထဲထည့်ရ်ျသုပ်ပြီး တည်ခင်းဧည့်ခံနိုင်ပါပြီ။ (လက်ဖက်ကလဲ နှပ်ပြီးသား ချိစ်လဲပါပြီးသားကြောင့်မို့ ဆားထည့်စရာမလိုပါ။)
ချက်ပြုပ်ပြသူ - အိစံ
ထားဝယ် မောင်းမကန်ရောက်တဲ့အခါ ဒီသာခွေယိုင်ဆိုတာလေးကို မလွဲမသွေ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့က အဲဒီမှာတော့ မစားခဲ့ရပါဘူး။ ရောင်းတဲ့ အစ်မက ပြောပြလိုက်တာပါ။ ပြောတာတောင် သူ့ဆိုင်ထဲ ခဏဝင်တဲ့အချိန် မေးလာလိုက်တာ။ လွယ်လည်းလွယ်လို့လေ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက ဓနိပျားဆိုတာ ထားဝယ် သာခွေယိုင်မှာ မပါမဖြစ် ထည့်ကြပါတယ်။ ဓနိပျားကို ရန်ကုန်မှာ ဝယ်လို့မလွယ်ပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွေမှာ လွယ်ပါ တယ်။ Coconut Sugar Paste ပါ။ လုပ်ကြည့်ရအောင်။
ပါဝင်ပစ္စည်များ ( ၅ ယောက်စာ)
- ကောက်ညှင်းအနက်(ချိတ်) - ၁ ခွက်
(ဆန်ချိန်ခွက် Rice Cooker)
- အုန်းနို့ဘူး - ၁ ဘူး (200 ml)
- ဓနိပျား (Coconut Sugar) - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁။ ကောက်ညှင်းကို အနည်းဆုံး ၂ နာရီလောက်တော့ ရေစိမ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ရေစိမ်ပြီးသား ကောက်ညှင်းတွေကို စေးပြီး နူးပြဲနေအောင် ပြုတ်ရပါတယ်။ ဓနိပျားပါထည့်ပြီး ပြုတ်ရတာပေါ့နော်။ မွှေပေးနေရင်း နူးအိပြဲလာရင် ရပါပြီ။
၂။ အုန်းနို့ကျိုတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဆားလေးကို ပါလေကာလေးထည့်ပြီးြွကက်မြီးတန်းသည်အထိ ကျိုပေးပါ။
၃။ြွကက်မြီးတန်းက ဘာလဲဆိုရင် ကျိုနေရင် ဇွန်းကို မလိုက်လို့ အုန်းနို့အရည်က အောက်ကအိုးမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့အရည်နဲ့ တန်းတန်းလေးဖြစ်နေတာကို ပြောတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ရပ်လိုက်၊ မီးပိတ်လိုက်မှ အေးတဲ့အခါ တော်တော်ပျစ်ပျစ်လေး အနေရပါတယ်။
၄။ အခုဆိုရင် သာခွေယိုင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
၅။ ကောက်ညှင်းကို ပန်းကန်ခွက်လေးထဲ ထည့်ပြီး အုန်းနို့ကို ဆမ်းစားရတာပါ။ ဆိမ့်ဆိမ့်ချိုချိုလေးနဲ့ စားလို့တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ (ဓနိပျား မရနိုင်လျှင် သကြားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဓနိပျားက ပိုမွှေးပြီး အချိုပိုလေးပါတယ်။)
ဆိုဖီယာက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသူဖြစ်လို့ ခေါပုပ်ဆိုရင် နှမ်းထောင်းခေါပုပ်ကို အချပ်လိုက်နဲ့ မီးကင်ရောင်းတာမျိုး နှမ်း၊ ကြံသကာထည့်ပြီး အပျော့ရောင်းတာမျိုးတွေသာ မွေးရပ်ဇာတိမှာ မြင်ခဲ့၊ ရင်းနှီးခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တောင်ပိုင်းအလည်သွားတော့ ဈေးထဲမှာ ခေါပုပ်အဖြူကို နှမ်းမဲလုံးနဲ့ လူးပြီး ထန်းလျက်ရည်နဲ့ တွဲဖက်စားတဲ့ အလေ့အထလေးကို တွေ့ခဲ့ဖူးတာပါ။ ဒါလေးကတော့ အဝေးရောက်နေသူများ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်စားနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ လုပ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ နှမ်းမဲလုံးမရနိုင်ပါက ရိုးရိုးနှမ်းမဲ၊ နှမ်းဖြူတို့ကို အစားထိုးပြုလုပ်နိုင်ပြီး မွှေးရနံ့ ကွာခြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်။
- ကောက်ညှင်းမှုန့် - ၂၅၀ ဂရမ်
- ရေ - 220 ml
- နှမ်းမဲလုံးထောင်း - တစ်ပန်းကန်
- ထန်းလျက်ရည် - တစ်ပန်းကန်
- ဆီ - အနည်းငယ်
၁။ ကောက်ညှင်းမှုန့်ကို ပန်းကန်တစ်ခုထဲထည့်ပြီး ဆားနှင့်ရေကိုထည့်ကာ သမအောင် နယ်ပေးပါ။
၂။ ပန်းကန်ကို မိုက်ခရိုဝေ့မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပန်းကန်ကို ရွေးပြီး အသုံးပြုပါ။ မုန့်နှစ်ပန်းကန်ကို မိုက်ခရိုဝေ့မှာ ၁ မိနစ်လျှင် ၁ ကြိမ်ခန့် အပူပေးပြီး အပြင်ထုတ်ကာ သမအောင်ပေးပါ။
၃။ ၃ ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပြီး မုန့်နှစ်ကျက်ပါက ခဏအအေးခံကာ မုန့်လုံးကို ဆီအနည်းငယ်လူးပေးပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ အိတ်တစ်ခု ထဲထည့်ကာ စဉ်းတီတုံးပေါ်မှာ တလိမ့်တုံးနှင့် နာနာထုပေးပါ။ ညက်လာပါက အပြင်ထုတ်ယူကာ ကတ်ကြေးဖြင့် ညှပ်ယူပြီး အသင့်လှော်ထောင်းထားသော နှမ်းလှော်မှာ လူးပေးကာ ထန်းလျက်ရည်ဖြင့် တွဲဖက်တည်ခင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 4:43 AM No comments: